नेपालीले पुष्टि गरे डार्बिनको सिद्धान्त- फिचर - कान्तिपुर समाचार
नेपालीले पुष्टि गरे डार्बिनको सिद्धान्त
फाल्गुन ३, २०७१ अतुल मिश्र
काठमाडौं — क्रमिक जैविक विकासवादको सिद्धान्त (थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन) का प्रणेता चाल्र्स डार्बिन बाँचेका भए अहिले धेरै खुसी हुने थिए र मुरी-मुरी धन्यवाद दिने थिए, नेपाली वैज्ञानिक डा. संगीत लामिछानेसहितको टोलीलाई ।
कारण- डार्बिनको डेढ सय वर्षअघिको सिद्धान्त पूर्ण सत्य रहेको प्रमाणित नेपाली वैज्ञानिक लामिछानेले गरेका छन् ।
डा.लामिछाने मुख्य अनुसन्धानकर्ता रहेको हालै गरिएको अनुसन्धानले विवादमा पर्दै आएको डार्बिनको सिद्धान्त सत्य भएको प्रमाणित गरेको हो, जसबारे डार्बिनको २०६ औं जन्मदिनका अवसरमा गत बिहीबार 'नेचर' जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।
डार्बिनले सिद्घान्त प्रतिपादन गरेपछि विगत डेढ सय वर्षमा विभिन्न वैज्ञानिकको यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न सिद्घान्त र मत आए, जसमा कसैले डार्बिनको समर्थन गरे त कसैले विरोध ।
'डेढ सय वर्ष डार्बिनको सिद्घान्तको समर्थन र विरोधअन्तर्गतकै तर्क-वितर्कमा बित्यो,' पेसाले पशु चिकित्सक रहेका डा.लामिछानेले कान्तिपुरसँग भने, 'तर हाम्रो अनुसन्धानले डार्बिनको डेढ सय वर्षअघि प्रतिपादित सिद्घान्त सही रहेको प्रमाणित गरेको छ ।'
डार्बिनको सिद्घान्तअनुसार जुन जीव प्रकृतिसँग संघर्ष गर्छ त्यो बाँच्नुका साथै आफ्नो सन्तति कायम राख्दै पृथ्वीमा रहिरहन्छ । तर जसले प्रकृतिसँग संघर्ष गर्न सक्दैन, लोप भएर जान्छ । डार्बिनले दक्षिण अमेरिकाको कालापावस टापुका भँगेराका पातलो र बाक्लो चुच्चो भएका चराको नमुना लिएर खानपानलगायत चुच्चोको अध्ययन गरेका थिए ।
उनले खानाको प्रकृति र चराको चुच्चोको प्रकृतिमा समानता देखे पछि क्रमिक विकासवादको सिद्घान्त प्रतिपादित गरे ।
दुई शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको कालापावस टापुका चराहरूमध्ये क्षमतावान्ले मात्र बाँच्न सक्ने स्थिति देखियो । उक्त टापुमा कुनै समय वर्षौंसम्म पानी नभएर सुख्खा लागेको थियो । सुख्खापछि टापुमा खानेकुराको नितान्त अभाव भयो । त्यहाँ ठूलठूला कडा खालका खानेकुरा मात्र बाँकी रहे । टापुमा सुख्खाले गर्दा किरा-फट्याङ्ग्रा, फलफूलसमेत हराएर गए ।
'त्यस्तो अवस्थामा जुन चराको बाक्लो र मोटो चुच्चो थियो, उनीहरू बाँच्न सफल भए भने साना र पातलो चुच्चो भएका चराहरू लोप भए, मरेर गए,' हाल उप्साला विश्वविद्यालय स्विडेनमा यही विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका डा.लामिछाने भने, 'यो नै डार्बिनको क्रमिक विकासवादको सिद्घान्तको उदाहरण हो ।'
उप्साला विश्वविद्यालयद्वारा गत बुधबार जारी विज्ञप्तिअनुसार डा.लामिछानेको अनुसन्धानले डार्बिनले प्रतिपादित सिद्घान्तको मूल आधार रहेको कालापावस टापुका भँगेराजस्तै चराको गत २० लाख वर्षमा समग्र विकासक्रमको अध्ययन र उनीहरूको चुच्चो फरक हुने उत्पत्तिसम्बन्धी (जेनेटिक) कारण पत्ता लगाएको हो ।
विज्ञप्तिअनुसार अनुसन्धानले चराको शरीरमा भएका विभिन्न प्रकारका 'जिन' मध्ये कुन 'जिन' ले गर्दा उनीहरूको चुच्चो फरक हुन्छ भन्ने पत्ता लाग्यो । डा.लामिछाने लगायतका टोलीले चराको चुच्चो फरक हुनुको कारण 'एएलएक्स-१' जिन रहेको पत्ता लगाए । 'एएलएक्स-१ त्यही जिन हो, जसले मान्छेको अनुहारको बनावट निर्धारित गर्छ,' डा.लामिछानेले भने, 'अर्को संयोग हेर्नोस् चरा र मानव दुवैको अनुहार निर्धारित गर्ने 'एएलएक्स-१' जिन नै हो ।' मान्छे र चरामा एउटै जिनले अनुहार निर्धारित गरेको हुँदा यो अनुसन्धानले अनुहार बिगि्रएको समस्या भएका मान्छेलाई एएलएक्स-१ जिनको सहयोगले उपचार गर्न सकिने सम्भावनाको ढोकासमेत खोलेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'डार्बिन जीवित भएका भए कति खुसी हुन्थे होला ?' मुख्य अनुसन्धानकर्ता डा.लामिछानेसहित अध्ययनमा उप्साला विश्वविद्यालयका अन्य वैज्ञानिकसमेत सहभागी थिए ।
विराटनगरका लामिछाने त्यहींबाट प्लस टु सकाएर कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर चितवनबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक गरेका हुन् । यसपछि युरोपियन युनियनको छात्रवृत्तिअन्तर्गत नेदरल्यान्ड्सबाट जेनेटिक्स/भेटेरिनरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । हाल उनी उप्साला विश्वविद्यालय स्विडेनमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् । ३० वर्षीय डा.लामिछानेको विद्यावारिधि एक वर्षमा सकिनेछ । अनुसन्धानकै क्षेत्रमा लागिरहने उनले बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७१ ०८:३५
माछा बोक्दाबोक्दै कराँचीको जेलमा
फाल्गुन ३, २०७१ देवेन्द्र भट्टराई
कराँची (पाकिस्तान) — भारत-पाकिस्तान समुद्री कुनोमा भारतीय मछुवाले अह्राएअनुसार माछाका भारी जहाजमा लोड-अनलोड गर्दै आएका एक नेपाली युवक २९ महिनादेखि कराँचीस्थित जेलमा थुनामा छन् ।
पाकिस्तानको सिन्ध र भारतको गुजरातका बीचको सामुद्रिक कुनोमा १३ मछुवाका माझ समुद्री सुरक्षा मामला हेर्ने पाकिस्तानी प्रहरीले भेटेपछि सन् २०१२ को सेप्टेम्बर १९ का दिन गुल्मी बडागाउँ-३ का मीनबहादुर सर्तुङ्गे मगर पक्राउ परेका हुन् । अहिले उनी कराँचीको मलिर जेलमा छन् ।
अघिल्ला दुई वर्षदेखि गुजरातस्थित एक होटलमा काम गर्दै आएका मीनबहादुर बढी पैसा कमाउने लोभमा मछुवाका साथ लागेर जहाज (सी-मरिन) मा सामुदि्रक क्षेत्रमा काम गर्न आएका थिए । होटलमा काम गर्दा ५ हजार भारु मासिक तलब रहेका उनलाई माछाका भारी बोक्ने काममा मासिक १२ हजार भारु दिइने भनिएको थियो ।
माछा मार्दै जाँदा सामुद्रिक सिमाना थाहा नपाई अर्को देशको सामुदि्रक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने एकअर्को देशका नागरिकलाई कहिले भारतीय र कहिले पाकिस्तानी सुरक्षा प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने गर्छ । भारत-पाक सम्बन्ध सहजीकरण गर्ने क्रममा दुवैतर्फका मछुवालाई उत्तिकै संख्यामा जेलमुक्त गराउँदै दुई देशबीचमा संवाद अघि बढ्ने गरेको छ । अहिले पनि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकासहित मुलुकका जेलहरूमा एकअर्काको सामुद्रिक सीमा उल्लंघन गरेको अभियोगमा हजारौं नागरिक थुनामा छन् ।
यसै क्रममा ६ महिनाअघि पाकिस्तानी जेलबाट मुक्त गरिएका केही मछुवाले 'एक नेपाली केटा पाकिस्तानी जेलमा रहेको र उसलाई उद्धार गर्ने कोही पनि नभएको' भन्दै भारतीय टेलिभिजनमा बोलेको खबरका आधारमा थुनामा रहेको नेपाली पहिचान गर्न इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावास लागिपर्दै आएको थियो ।
'नेपाली युवक जेलमा रहेकोबारे जानकारी खोज्न हामीले यहाँको विदेश/गृह मन्त्रालयमा तीन पटक पत्राचार गर्‍यौं । तर हरेक पटकको जवाफमा कोही पनि नेपाली मरिन क्षेत्रबाट समातिएर थुनामा नरहेको लिखित जवाफ आयो,' इस्लामावादस्थित राजदूत भरतराज पौड्यालले भने, 'तर यो विषय नसेलाएपछि जेल निरीक्षणमा गइरहने केही गैरसरकारी संस्थाको सूत्र पहिल्याउँदै डेढ महिनाअघि मात्रै मीनबहादुर कराँची आसपासका जेलमा छन् भन्ने पत्तो लागेको हो ।' कराँची आसपासमा केन्द्रीय र मलिर जेल मात्रै छन् ।
थुनामा रहेका नेपालीको प्रारम्भिक सूचना पाएपछि गत जनवरी २१ मा मलिर जेल पुगेका दूतावासका काउन्सेलर तीर्थराज अर्यालले मीनबहादुरलाई भेटेका थिए । 'थुनामा परेका नेपालीको बोलाउने नाम पम्फा रहेछ, पक्राउ परेका कागजात र सबै रेकर्डमा पम्फा नाम राखिएको छ,' अर्यालले भने, 'उनलाई भेट्नुअघि नामको सही प्रमाणीकरण गर्नमै केही समय लागेको थियो ।' कराँची एयरपोर्टबाट १० किलोमिटर टाढाको मलिर जेलमा राखिएका मीनबहादुरले आफू थुनामा परेको २९ महिनामा पहिलो पटक कोही नेपाली भेट्न पाएको बयान सुनाएका थिए ।
'गुजरातको होटलमा काम गरिरहेका बेला त्यहाँ आइरहने ग्राहकमध्येबाट कसैले समुद्रमा माछा मार्न जाने कुरा सुनाएका थिए । पानी जहाजमा चढेपछि कहाँ, कुन ठाउँमा आइयो भन्ने मलाई थाहा हुँदैनथ्यो । अरू सरहरू भने कम्प्युटरमा केही हेर्दै कुरा गरिरहेका हुन्थे । म भने माछा मारेपछि त्यसको भारी पानी जहाजमा लोड-अनलोड गर्ने गर्थें,' काउन्सेलर अर्याललाई मीनबहादुरले सुनाएका थिए, 'हामी दिनरात समुद्रमै हुन्थ्यौं । बाहिर कता, के भइरहेको छ थाहा हुन्नथ्यो । महिनाको १२ हजार भारुका दरमा २ महिनाको तलब गाउँमा पठाउने काम गरिसकेको थिएँ । एक रात जहाजमै सुतिरहेका बेला हामी सबैलाई प्रहरीले उठाएर यता ल्याएको हो । कहाँ ल्याएको हो, किन ल्याएको हो भन्ने पनि मैले धेरैपछि मात्रै थाहा पाएँ ।'
उता गुल्मी वडागाउँमा दुई नाबालक छोराको पनि बिजोग छ । दुईमध्ये ३ वर्षको कान्छा छोरालाई लिएर मीनबहादुरकी श्रीमती अन्तै कतै गइसकेकी छन् । अर्को ५ वर्षे जेठो छोरालाई भने मीनबहादुरका बाबु मने सर्तुङ्गे मगरले रेखदेख गर्दै आएका छन् ।
आमाले सानैमा संसार छाडेर गएपछि टुहुरो बनेका मीनबहादुरले स्कुले पढाइ पूरा गर्न पाएका थिएनन् । एक नेपालीले अन्जानमा बेहोर्नुपरेको थुनाबारे पाकिस्तान सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको र नियतवश नभएको यो गल्तीमा सरकारले छिट्टै 'पुनर्विचार' गर्ने भएको राजदूत पौड्यालले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमा उल्लंघन गर्नेलाई गम्भीर अपराध मानिने र यस्तो अभियोगमा आजीवन कारावास हुने भए पनि 'नियतवश नभएको गल्ती' बारे खुलाएर दूतावासले पाकिस्तान सरकारसँग उनको रिहाइको आग्रह गरेको हो ।
मीनबहादुरको घरफिर्ती टिकटको प्रबन्ध मिलाउन दूतावास लागिपरेको अर्यालले बताए । कानुनीलगायत प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई एक महिनाभित्र घर पठाउन सकिने उनले जनाए । छोरो भारत-पाकिस्तानमध्ये कतैको जेलमा परेको खबर पाए पनि के-कस्तो हाल छ भन्ने पत्तो नभएको बाबु मनेले बताए । 'मेरो छोरो फर्केर आउला त नानी ?' नाति साथैमा लिएर बडागाउँ नजिकै बाख्रा चराउन निस्किएका मनेले अघिल्लो बिहीबार कान्तिपुरसँग फोनमा सोधेका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७१ ०८:३१